USIP dia mitady ny manam-pahaizana momba ny programa, Campus manerantany - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Ny Specialist Program dia hanatevin-daharana ny ekipan'ny USIP Campus Global izay miara-miasa amin'ireo manam-pahaizana ambony sy andrim-pihavanana ho an'ny famokarana fampianarana an-tserasera, podcast ary fiofanana virtoaly hafa ho an'ny mpihaino manerantany sy mihombo. Izy / izy no ho mpampita hevitra voalohany hanompo sy hifandray mivantana amin'ny vondrom-piarahamonina Global Campus an'ny mpampandry tany manerantany. Ny Specialist Program dia hiara-hiasa akaiky amin'ny fandaharanasa USIP (lohahevitra sy firenena maro) hanaraka sy hanohana ireo vondrom-piarahamonina misy fandaharana ao amin'ny Global Campus. Izy / izy koa dia hiara-miasa amin'ny programa USIP hanampiana amin'ny famolavolana sy fampiharana fampiharana isan-karazany amin'ny fotoam-pampiofanana hybrid izay mifangaro amin'ny fanofanana manokana sy an-tserasera ary manara-maso andiana andraikitra amin'ny fitantanana sy fitantanan-draharaha hanomezana fanohanana ankapobeny ny programa Global Campus an'ny USIP. Ity toerana ity dia miorina ao Washington, DC, ary manao tatitra amin'ny talen'ny Global Campus.
Ny oniversitem-panjakan'i California dia mitady profesora mpanampy amin'ny resaka sosialy
Fianarana an-tserasera maimaim-poana: 100 taona Diplomacy Mangina, fanoherana tsy misy herisetra ary fandriampahalemana
Oktobra 10, 2016 Fiofanana / atrikasa 0
Nampiantranoin'ny Campus Global an'ny USIP, ireo mpandray anjara amin'ity fampianarana manokana amin'ny Internet ity dia hianatra amin'ireo mpitarika ny fiarahamonina AFSC momba ny fotoana manokana, fampielezan-kevitra ary ny zava-bita tamin'ny tantaran'ny Quaker izay mifantoka amin'ny lohahevitra momba ny fananganana hetsika, ny famahana ny antony mahatonga ny fifandonana ary ny herin'ny olona andavanandro. mamorona fanovana. [tohizo ny famakiana…]
Ny zon'ny fandriam-pahalemana: resadresaka nifanaovana tamin'i Nadeem Ghazi momba ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana any Pakistan
Novambra 17, 2016 Vaovao sy hevi-dehibe 0
The Frequency Peace dia podcast isan-kerinandro an'ny USIP Global Campus. Ity fizarana ity dia ahitana an'i Nadeem Ghazi, mpanorina sy talen'ny World Learning Grammar School & Institute any Pakistan. Nadeem dia manana traikefa amin'ny fanabeazana fandriam-pahalemana niara-niasa tamin'ny fikambanana isan-karazany, anisan'izany ny Peaceful Schools International, ny Institute of Peace an'ny United States, Peace Direct-UK, ary ny British Council for Sports For Peace. [tohizo ny famakiana…]